Messi’s back! ဆိုးရှားတဲ့ ၂၀၂၀ ကို အမွနျဆုံးမပွေီ့း နှဈသဈကို စိတျသဈ၊ လူသဈနဲ့ ကွိုဆိုနတေဲ့ မကျဆီ – Premier League Special
January 10, 2021 AuthorP Uncategorized 0
၂၀၂၁ အတှငျး အမရေိကနျမှာဖွဈပှားနတေဲ့ ကိစ်စတှကေ ၂၀၂၀ လိုပဲ ထူးဆနျးစရာတှနေဲ့ပွညျ့နှကျနပေမေယျ့ လာလီဂါမှာတော့ ပုံမှနျအခွအေနတှေကေ ပွနျလညျရောကျရှိလာခဲ့ပါပွီ။ ပွောရရငျ စဈမှနျတဲ့လီယှနျနယျမကျဆီနဲ့အတူပေါ့။
ဘာစီလိုနာအသငျးခေါငျးဆောငျ မကျဆီဟာ ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ သူ့အတှကျ စိတျဒဏျရာအဖွဈဆုံးနှရောသီကို ဖွတျသနျးခဲ့ရပွီးနောကျ အခုတော့ ပီခြီခြီ(လာလီဂါဂိုးသှငျးဘုရငျဆု) ၇ကွိမျရရှိထားတဲ့ သူ့အတှကျ လာလီဂါမှာ ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးကစားသမားနရော ပွနျရောကျလာပါတယျ။
သူဟာ ၂၀၂၁ နှဈသဈမှာ အထူးခွစှေမျးပွနပွေီး ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ ဘီလျဘာအိုကို ၂-၃ ဂိုးနဲ့အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ၂ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပွီးနောကျ အခုလညျး ယမနျနညေ့က ဂရနျနာဒါကို ဝ-၄ ဂိုးနဲ့အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ၂ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပွီး အသငျးကလညျး အမှတျပေးဇယားထိပျဆုံးက အကျသလကျတီကိုနဲ့ ၄ မှတျအကှာအနအေထားကို တကျရောကျလာပါတယျ။
အကျသလကျတီကိုက ဘာစီလိုနာထကျ ၃ပှဲလြော့ကစားထားတာ မှနျပမေယျ့ အနညျးဆုံးတော့ လကျရှိအနအေထားက ရာသီအစမှာ ရလဒျတှဆေိုးရှားခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာအတှကျ စိတျသကျသာရသှားတဲ့အခိုကျအတနျ့ဖွဈပွီး မကျဆီလညျး ပွနျလညျပွုံးပြျောလာပါပွီ။
မကျဆီဟာ ပွီးခဲ့တဲ့နှရောသီက ဘာစီလိုနာကနေ ထှကျခှာဖို့ အပွငျးအထနျကွိုးစားခဲ့ပွီးနောကျ အခုတော့ သူ လကျရှိကစားနတေဲ့ နရောမှာ ပြျောရှငျနပွေီး ဘောလုံးကစားရတာကို ထပျမံကနြေပျလာတာလညျး အသအေခြာပါပဲ။
မကျဆီဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့အဆိုးရှားဆုံးနရေ့ကျတှမှောတောငျမှ အသငျးရဲ့အကောငျးဆုံးကစားသမားအဖွဈ ရပျတညျနဆေဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ၂၀၂၀-၂၁ ပထမရာသီဝကျကတော့ မကျဆီအတှကျ တကယျ့ကို ဆိုးရှားလှနျးခဲ့တာအမှနျပါပဲ။
အဲဒီတုနျးက မကျဆီဟာ ပငျနယျတီသှငျးဂိုးတှအေမြားအပွားသှငျးယူခဲ့ပမေယျ့ အခုတော့ အဲဒီလိုမဟုတျတော့ဘဲ အရငျမကျဆီမြိုး ပွနျဖွဈနပေါပွီ။
မကျဆီဟာ အခုဆိုရငျ လာလီဂါမှာ ၁၁ဂိုးသှငျးယူထားပွီး သူ့အနအေထားနဲ့ဆိုရငျ နညျးပါးတဲ့ဂိုးအရအေတှကျဖွဈပမေယျ့ ရုနျးကနျနရေတဲ့အသငျးမှာ ဒီလောကျဂိုးသှငျးထားနိုငျတာက သိပျမဆိုးဘူးလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
Messi’s back! ဆိုးရွားတဲ့ ၂၀၂၀ ကို အမြန်ဆုံးမေ့ပြီး နှစ်သစ်ကို စိတ်သစ်၊ လူသစ်နဲ့ ကြိုဆိုနေတဲ့ မက်ဆီ
၂၀၂၁ အတွင်း အမေရိကန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိစ္စတွေက ၂၀၂၀ လိုပဲ ထူးဆန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပေမယ့် လာလီဂါမှာတော့ ပုံမှန်အခြေအနေတွေက ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ပြောရရင် စစ်မှန်တဲ့လီယွန်နယ်မက်ဆီနဲ့အတူပေါ့။
ဘာစီလိုနာအသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဆီဟာ ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် သူ့အတွက် စိတ်ဒဏ်ရာအဖြစ်ဆုံးနွေရာသီကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီးနောက် အခုတော့ ပီချီချီ(လာလီဂါဂိုးသွင်းဘုရင်ဆု) ၇ကြိမ်ရရှိထားတဲ့ သူ့အတွက် လာလီဂါမှာ ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားနေရာ ပြန်ရောက်လာပါတယ်။
သူဟာ ၂၀၂၁ နှစ်သစ်မှာ အထူးခြေစွမ်းပြနေပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဘီလ်ဘာအိုကို ၂-၃ ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ၂ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် အခုလည်း ယမန်နေ့ညက ဂရန်နာဒါကို ၀-၄ ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ၂ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး အသင်းကလည်း အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ဆုံးက အက်သလက်တီကိုနဲ့ ၄ မှတ်အကွာအနေအထားကို တက်ရောက်လာပါတယ်။
အက်သလက်တီကိုက ဘာစီလိုနာထက် ၃ပွဲလျော့ကစားထားတာ မှန်ပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ လက်ရှိအနေအထားက ရာသီအစမှာ ရလဒ်တွေဆိုးရွားခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာအတွက် စိတ်သက်သာရသွားတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပြီး မက်ဆီလည်း ပြန်လည်ပြုံးပျော်လာပါပြီ။
မက်ဆီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီက ဘာစီလိုနာကနေ ထွက်ခွာဖို့ အပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက် အခုတော့ သူ လက်ရှိကစားနေတဲ့ နေရာမှာ ပျော်ရွှင်နေပြီး ဘောလုံးကစားရတာကို ထပ်မံကျေနပ်လာတာလည်း အသေအချာပါပဲ။
မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အဆိုးရွားဆုံးနေ့ရက်တွေမှာတောင်မှ အသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၂၀-၂၁ ပထမရာသီဝက်ကတော့ မက်ဆီအတွက် တကယ့်ကို ဆိုးရွားလွန်းခဲ့တာအမှန်ပါပဲ။
အဲဒီတုန်းက မက်ဆီဟာ ပင်နယ်တီသွင်းဂိုးတွေအများအပြားသွင်းယူခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်တော့ဘဲ အရင်မက်ဆီမျိုး ပြန်ဖြစ်နေပါပြီ။
မက်ဆီဟာ အခုဆိုရင် လာလီဂါမှာ ၁၁ဂိုးသွင်းယူထားပြီး သူ့အနေအထားနဲ့ဆိုရင် နည်းပါးတဲ့ဂိုးအရေအတွက်ဖြစ်ပေမယ့် ရုန်းကန်နေရတဲ့အသင်းမှာ ဒီလောက်ဂိုးသွင်းထားနိုင်တာက သိပ်မဆိုးဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
လီဗာပူးကို ၆ မှတျအထိ ဖွတျနိုငျမယျ့ အရေးကွီးပှဲတှမှော ပေါ့ဂျဘာပါဝငျနိုငျဖို့ မသမေခြာဖွဈနေ